Translate Lithuanian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Lithuanian to Myanmar (Burmese), Lithuanian to Myanmar (Burmese) translations, Lithuanian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Labas, kaip sekasi မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Ar yra kas nors? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Aš tave labai myliu ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Kiek kainuoja šis mėsainis? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Ar galite vadinti mane taksi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
aš atsiprašau ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Aš domiuosi ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Mano skrydis buvo atidėtas အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Aš esu čia verslo reikalais ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Labas mano vardas yra မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Atsiprašau, bet aš susituokęs ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
aš norėčiau tavęs paklausti ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Ar galite paimti mane į oro uostą? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Koks laikas dabar, prašau? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Kur yra artimiausia policijos nuovada? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Ar galiu skolintis jūsų telefono įkroviklį, prašau? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Ar gali man padeti? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Užsisakyk man gėrimą, prašau? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Kiek tai kainuoja? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Aš esu alergiškas glitimas ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Kreipkitės į gydytoją ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Ar yra gydytojas? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Ar galiu skambinti? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Paskambink man savo bosą. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ši vieta yra labai graži ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Paimk mane į viešbutį ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Koks mano kambario numeris? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?